မောင်ပြုံးကို ...... — MYSTERY ZILLION
မောင်ပြုံးကို Public Relationship Moderator အဖြစ် ယာယီ ခန့်အပ်လိုက်သည်။ တစ်လပြည့်သောနေ့တွင် Admin အဖွဲ့မှ စီစစ်၍ အမြဲတမ်း Moderator အဖြစ် ခန့်အပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Public Relationship Admin
Congratulation !! မောင်ပြုံး ....:103:
ရဲဘော် (ကွန်မြူနစ် အခေါ်အေ၀ါ်) ဆက်လုပ်။
mz အတွက်အလှုငွေလဲ ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘူး။ ကျနော်က ရန်ကုန်ပြန်လာလဲ တစ်ရက်ခွဲလောက်ပဲအချိန်ရတော့ ... ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်တောင် မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။ unicef က သူငယ်ချင်းတွေလဲ သူတို့ ငွေတွေ လှုဖို့ယူထားပြီး မပေးရသေးဘူးဆိုပြီး ဆဲလှပြီ .....
အခု ကျနော့်ညီ ( စိုင်းမြတ်သူ - 09 99 70535 ) ဆီမှာ - 35000 အပ်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်က မော်မော်တို့ မင်မင်တို့ .... ကူညီပြီး သူ့ကို အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး ယူလိုက်ကြပါဗျာ .....
ကျနော့်ကိုကော ... Mz ကိုပါ ကူညီတယ်လို့သဘောထားပြီး ကူညီပေးကြပါဦးနော် ....
ဟုတ်တယ်။ ဆက်လုပ် ရဲဘော် မောင်ပြုံး
Congratulation Mg Pyone.....!
Prepare for promotion ceremony dinner.... :67:
မောင်ပြုံးလို့ ခေါ်တော့ဘူး။ မော်ပြုံးလို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်။ :67: စိတ်ချပါ မယ်ပြုံးလို့ မခေါ်ပါဘူး။:) Congratulation ပါညီလေး။
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ... ဘာကျွေးမှာလဲ ... ရိုးရိုးတော့ မရဘူးနော် :d
မော်ပြုံးကို ဂုဏ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ယူဘူးနော် ပေးတာ။
မောင်ပြုံးက မသိမှာစိုးလို့ GTalk ထဲကနေ လာကြွားသွားတာကိုး။:D ဒါမျိုး အစမ်းခန့်ကာလ မျိုးလည်းရှိတာပဲလား။:D မော်ပြုံးရယ် တစ်လနဲ့တော့ အလုပ်မပြုတ်စေနဲ့နော်:D
မော် ပီးရင် ကြွား နိုင်ပါစေ
အင်း~~~~~~~~~နဂိုကမှ mz မှာ မိန်း ကလေး တွေ နဲ ပါတယ်ဆိုမှ
အစ်ကိုမဟုတ်ဘူးလေ ညီလေးပါခင်ဗျာ..... ကျနော်က 1992 မွေးတာမို့ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... တတ်စွမ်းသလောက်ကြိုးစားသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ.....
အော် 82 ထင်လို့ပါ။ မောင်ပြုံးအတွက်၀မ်းသာပါတယ်။ဆက်လုပ်မော်ပြုံးရေ။
ဂုဏ်ယူတာနဲ့ ဂုဏ်ပေးတာ ကြားက....ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်တယ်နော်..........မောင်လေး မော်ပြုံး:5::5::5:
ညီလေးရေ............ဝမ်းလည်းသာပါတယ် ။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ် ။
Public Relationship Moderator ဆိုတော့ mz အတွက် မမလှလှလေးတွေများများခေါ်ခဲ့နော်:D
Congratulation !!! ပါအကိုရေ အကိုဖြစ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါနဲ့ အကိုက ကိုစည်သူနေရာဆိုတော့ ကိုစည်သူဘယ်တောသွားပုန်းလဲဗျ :P
Congratulation ပါ ကိုမောင်ပြုံး
ရဲဘော် မင်းတာဝန်ဆိုတာဘာလဲ သိတယ်မလား။ လိုအပ်ပါက ဖိုရမ်အတွက် အသက်ပါစွန့်ရဲရမယ်။ မင်း အစ်ကိုတို့လို ဆီနီယာတွေကို special treat လုပ်ရမယ်။ ဥပမာ။ ။ မိန်းခလေး မန်ဘာအသစ်ဝင်ရင် ဆီနီယာတွေနဲ့ အရင် မိတ်ဆက်ပေးရမယ်။ ရဲဘော် ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်၊ လမ်းက နည်းနည်းတော့ ကြမ်းမယ်။ ရဲဘော်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် CONGRADULATION ပါမောင်လေးပြုံးရေ
ပြုံးလေး moderator ဖြစ်သွားတာကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ :41::41::8:ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ။ Public Relation Moderator ဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေ အရေး အလေးပေးပြီးကိုင်တွယ်မဲ့ပုံရှိတယ်။:D ပြုံးလေးတော့ နောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းကနေ ဆင်းတော့မယ် မထင်ဘူး။:71:
ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ mz အတွက် ဒီထက်ပိုပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။
ကိုလူပျိုကြီး ပြောသလိုပဲ တစ်လတည်းသာ သက်တမ်းခံတဲ့လူတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မော်မော်ကနေ
မင်မင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြင့်သွားတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
Congratulation !! ပါ ..မောင်ပြုံး ...
Congratulation Mg Pyone.... OR Mor Pyone..
မောင်ပြုံးကနေ .. မော်ပြုံး ဘ၀ ကိုပြောင်းသွာ းတော့လဲဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ သူထိုက်နဲ့သူကံ သတ္တ၀ါ တစ်ခုကံတစ်ခုပေါ့ .. မော်ပြုံးရေ .. အမျှ..အမျှ .. အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော ..
ှSorry for late, Congratulations to Mor Pyone.
Congratulation ပါ မောင်ပြံူးရေ ........................:):41:
ဟယ် :O :O
နာနောက်ကျနေတယ်ကွာ ဆောဒီးး မောင်ပြုံးး
ကြူကြူမှာ one table ကွယ် :P:P
အနော့်ကို ဆို ဂျီတော့တင်မက ၀ူးး
ညကြီးမင်းကြီး ဖုန်းဆက် တာ ဘာများလဲလို.ဟီးးး :d :d
နင် မခေပါ၀ူး နာသိတယ် ဆက်လုပ် ဆက်လုပ် :)
မဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းရယ် မင်းတို့ စာမေးပွဲဖြေနိုင်လားလို့ မေးချင်တာပါ... အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...........
cheers up man
ဆန်ရင်းနာနာအဖွတ်ခံနိုင်ရမယ်နော် ... :39::39::39:
Congratulation ပါညီရေ ... MZ ကိုအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့မော်မော်တစ်ယောက် (ဆိုလိုတာက ကောင်မလေးချောချောလေးတွေများများခေါ်နိုင်တဲ့) ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .....
ကျွန်တော် လူပျိုကြီးကတော့ ဒီကိစ္စကို အရမ်းကို ထောက်ခံတာပဲ။:d
သြ .. အကိုကလက်စသတ်တော့ လက်ရှိလူပျိုကြီးဘ၀ကနေ အအိုကြီးဘ၀ကိုပြောင်းချင်နေပြီထင်တယ် ... ) ) ဆက်လုပ်အကိုရေ ဇွဲမလျှော့နဲ့ ...
မောင်ပြုံးရေနောက်ကျမှရောက်လာတာဆောရီးပါ။ mz အကျိုးများများသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်လဲအရင်လိုကောင်းကောင်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ မောင်ပြုံးများများ ကြည့်ရှုစောင်မ :d ပေးပါ။
ညီလေးပါခင်ဗျာ..... ကျနော်က 1992 မွေးတာမို့ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... တတ်စွမ်းသလောက်ကြိုးစားသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ.....
မော်မော်အသစ်ဖြစ်သွားသူ မောင်မောင်ပြုံးအား ဂြိုဟ်နှစ်လုံးမှ ၀မး်မြောက်ကြောင်းသ၀ဏ်လွှာပေးပို့ :41::41::41:(ဘာစတိုင်မှန်းတော့ သိဘူး၊ ဟီး..... သိဘူးပဲ ထားလိုက်နော် )
အင်မတန်မှကို လိုက်ဖက်လှပါပေတယ်။ ဒီကလေးက ဖျာရောင်းတတ်တယ်။ :d
ဒီကလေးက ဖျာရောင်းတတ်တယ်။ :d
မောင်ပြုံးက ဖျာရောင်းတာလား ဦးတွီတီကြီး :d
၀မ်းသာပါတယ် ညီလေးမောင်ပြုံးရေ MZ မှာ အခုလို အဆင့်တိုးသွားတဲ ့အတွက်လဲဂုဏ်ယူပါတယ်
နောက်လဲ MZ ကို ဆက်လက်အကျိုးပြုနိင်တဲ ့သူဖြစ်ပါစေလို ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.........